Top 4 iTunes Alternative Software maka Android
3. Nyefee iTunes ka Android
4. Nyefee iTunes maka Android
Ya mere na ị na-a newbie na Android n'elu ikpo okwu mgbe Ditching iOS, ma na-achọ a software dị ka iTunes aka jikwaa gị Android ekwentị ọma? Ị na-nri ebe. Ebe a, ga-amasị m na-egosi gị 4 oké ọzọ ka iTunes na-arụ ọrụ na Android igwe na mbadamba.
Dị ka aha ya na-egosi, Wondeshare TunesGo bụ ike nile-na-otu iTunes ọzọ maka Android (na iOS) software. Na ya, ị nwere ike mfe mbubata zuru iTunes listi ọkpụkpọ ma ọ bụ họrọ media faịlụ site na iTunes n'ọbá akwụkwọ gaa Android ekwentị na mbadamba. Wezụga ya, ọ na-ahapụ gị nyefee photos, video na music si Mac ka Android ekwentị na mbadamba. Ebe a, m depụta si na salient atụmatụ ka i nghọta miri emi.
Mmekọrịta iTunes Library na Android on Mac na 1 Pịa.
Dọrọ na dobe họrọ music na video si iTunes ka Android.
Nyefee music, video akwụkwọ na foto site na Mac ka Android.
Hichaa iTunes oyiri media faịlụ na idozi music ID 3 Ama.
Dakọtara na Android - si Android 2.1 ka 4.4.
Akwado Samsung, Google, HTC, Sony, LG na ndị ọzọ Android ama na ngwaọrụ.
doubleTwist bụ ihe ọzọ na iTunes Ẹkot maka Android software na-eme ka ọ dị mfe maka ị nyefee music, video na foto gị Android ekwentị site WiFi ma ọ bụ eriri USB. Ọ na-arụ ọrụ a ụzọ dị mfe. Ị nwere ike kpam kpam aka ya na gị onwe gị.
Otú ọ dị, nke ahụ bụ nile ọ pụrụ ime na ihe ọ bụla ọzọ bụ. Na ndị ọzọ okwu, ọ ada ada jikwaa music, video na foto, dị ka ihichapụ ha ma ọ bụ converting ọdịyo na video. Ka njọ, ọ na-adịghị akwado Android 4.3 na elu. N'ihi ya, ọ bụrụ na i nwere otu ika-ọhụrụ Android ngwaọrụ, dị ka Google Nexus 5, ị nwere ike ghara ịdabere na a software.
Samsung Kies kere site Samsung, bụ a Samsung Ẹkot iTunes. Na ya aka, ị nwere ike nyefee mmekọrịta kọntaktị, music, photos, video na pọdkastị na site na gị Samsung ekwentị. Ọ na-ike gị nyefee iTunes music gị Samsung ngwaọrụ. Otú ọ dị,. Ọ bụrụ na ị na-echegbu banyere data ọnwụ, ị nwere ike iji ya ndabere memo, S Nyewe, oku na ndekọ, ozi, kọntaktị, akaụntụ email, video, mmasị na foto na kọmputa. Ke adianade do, ọ bụrụ nnọọ na okporo mmiri iPhone ma ọ bụ Blackberry ekwentị na-awụlikwa elu mmiri iji Samsung ekwentị, i nwere ike iji ndabere faịlụ nke iPhone na blackberry ekwentị iji weghachi data gị Samsung ekwentị.
Cheta na: Ọ bụ nanị maka Samsung ekwentị na mbadamba. Wezụga ya, ọ ada ada jikwaa ngwa, ozi na akwụkwọ faịlụ. Ọ na-adịghị nyefee smart listi ọkpụkpọ site na iTunes
Wondeshare MobileGo ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) bụ ike nile-na-otu Android iTunes ọzọ software. Na ya, ị nwere ike mfe mbubata music na listi ọkpụkpọ site na iTunes Ọbá akwụkwọ na kọmputa na-Android ekwentị na mbadamba mfe. Wezụga ya, ọ na-ahapụ gị nyefee ngwa, kọntaktị, foto na video gaa na site na Android ekwentị na mbadamba. Ebe a, m depụta si na salient atụmatụ ka i nghọta miri emi.
Na nkwado ma weghachite Android ekwentị na mbadamba na mbadamba na 1 Pịa.
Hazie Android ngwa, dị ka ịwụnye, uninstall na mbupụ ngwa ọdịnala na ogbe, na-akpali ngwa SD kaadị.
Nyefee na kọntaktị na site na Android ekwentị / mbadamba, ma jikota duplicates.
Zọpụtara niile ma ọ bụ họrọ ozi ederede dị ka TXT / XML faịlụ nke na-edebe ebe nchekwa.
Jikwaa akwụkwọ faịlụ na SD kaadị na nchekwa ekwentị. (Nani Windows eme)
Nyefee na ngwa, kọntaktị, ozi, media na ndị ọzọ n'etiti Android, iOS na Symbian. (Nani Windows eme)
Naghachi ehichapụ ozi, foto, kọntaktị, audio, video, ngwa na ndị ọzọ si gị android ngwaọrụ. (Nani Windows eme)
IHE: Mac version adịghị ka ị jikota oyiri kọntaktị.
Jikọọ Android ka Mac maka File Nyefee
Mmekọrịta Ihe niile beween Android na Mac
Best 3 Alternatives ka SyncMate
Nyefee Video na Music si iTunes ka Android
Mmekọrịta iTunes Library na Android
3 Ụzọ Ka idetuo iTunes Music ka Samsung
2 Ụzọ ka mmekọrịta iTunes Music ka HTC
Best 3 Alternatives ka iSyncr
Best 4 Alternatives maka doubleTwist
Otú nyefee Music si iPod nano ka iTunes
Olee otú Jiri nhazi ụda na na iTunes
> Resource> iTunes> Top 4 iTunes Alternatives maka Android Software